Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq & Shaam oo si cad uga hortimid hogaamiyaha Alqaacidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Halab – Mareeg.com: Jabhadda Islaamiga ah ee la magac baxday “Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish)”, kana dagaallanta Ciraaq iyo Suuriya ayaa si cad uga hortimid hogaamiyaha Alqaacidda Dr. Ayman Al-dawahiri.
Qaadacaadda Daacish ayaa timid kadib markii Dr. Ayman Al-dawaahiri uu iyaga ugu baaqay iney joojiyaan dagaalka ay kula jiraan Jabhadda kale ee Islaamiga ah ee Al-nusra.
Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish) iyo Jabhadda Al-nusra oo labaduba la dagaallama maamulka madaxweynaha Suuriya, Bashaar Al-asad ayaa bilihii lasoo dhaafay dhexdooda ka dagaallamayey, iyadoo qolo kasta dooneyso iney iyadu hogaanka qabato.
Labada dhinac ayaa dagaallo ku dhex mareen gobollada bariga iyo woqooyiga Suuriya, iyagoo ku laalamaya Shidaalka iyo gacan ku qabashada hubka.
Afhayeenka Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish), Abuu Muxamed Al-cadnaani oo soo diray cajal cod ah ayaa hogaamiyaha Alqaacidda ugu baaqay inuu badelo hogaamiyaha Jabhadda Al-nusra ee iyaga la dagaallameysa, Abuu Muxamed Al-juulaani.
Afhayeenka Daacish Abuu Muxamed Al-cadnaani ayaa yiri isagoo la hadlaya hogaamiyaha Alqaacidda Ayman Al-dawaahir yiri “Sheekh Usaama Bin Laden wuu mideeyey dhamaan Mujaahidiinta, balse adigu waad kala geysay, safkoodana waad kala dhantaashay”.
Isagoo weli la hadlaya Ayman Al-dawaahiri ayuu Abuu Muxamed Al-cadnaani yiri “Labo midood ayaa ku horyaalla: inaad khaladkaaga kusii socoto iyo inaad khaldkaaga qirato oo isi-saxdo”.
“Waa inaad naftaada dib ugu noqoto oo aad Alle hor joogsato si aad u hagaajiso wixii aad fasaahidisay” ayuu sidoo kale yiri Abuu Muaxamed Al-cadnaanin oo hadalka u weday Dr. Ayman Al-dawaahiri.
Abuu Muxamed Al-cabdnaani ayaa si cad u diiday dalab ka yimid Al-dawaahiri, kaasoo ku aadanaa in Daacish ay ku ekaato Ciraaq, wuxuuna Al-cadnaani dalabkaasi ku tilmaamay mid mustaxiil ah oo aan sharci aheyn.
Al-cadnaani ayaa meesha ka saaray in Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish) ay maalin ka mid noqotay Alqaacidda, wuxuuna weydiiyey Ayman Al-dawaahiri haddii uu maal iyo maskxba ku bixiyey dagaalka ay Daacish ku jirto.
Dagaalka u dhaxeeya kooxda Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish) iyo Jabhadda Al-nusra ayaa galaaftay nolosha ilaa 4000 ruux.
Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam (Daacish) ayaa ka dagaallama dalka Ciraaq waxaana ku jira dagaalyano ka kal yimid aduunka, halka Alnusra ay tahay Jabhad ka abuurtan gudaha dalka Suuriya.